‘जनताको शान्ति सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरू नै स्वयम् अपराध गर्न पुग्दछन्’
‘जनताको शान्ति सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरू नै स्वयम् अपराध गर्न पुग्दछन्’ प्रहरी सङ्गठनमा अपराध अनुसन्धान फितलो
‘सत्य सेवा सुरक्षणम्’ यो प्रहरी सङ्गठनको नारा हो । नारा नारामै सीमित कि काम र व्यवहारमा पनि लागू भएको छ ? यसको अनुभव आम जनताले कसरी गरेका छन् ? यसका बारेमा सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छ कि छैन ? यावत् प्रश्न हाम्रो सामु उभिएको छ । नेपालमा जनपद, सशस्त्र, दङ्गा नियन्त्रण र ट्राफिक प्रहरी गरी ५ प्रकारको प्रहरी सङ्गठन रहेको छ । प्राविधिक प्रहरीको छुट्टै समूह छ । अपराध अनुसन्धानमा विशिष्टीकृत समूह छुटाइएको छैन । जनपद प्रहरीले नै यो जनशक्ति समेटेको छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाकालमै जनशक्ति भएको प्रहरी सङ्गठनको आवश्यकता महसुस गरिएको कुरालाई वि.सं. २०५० मा साल ‘प्रहरी सुधार सुझाव आयोग’ ले औंल्याएको थियो । प्रहरीको जिम्मेवारीमा देखापरेको विविध समस्या, जटिलताका साथ सङ्गठनभित्र पेशागत विशिष्टीकरण चाहिने भनी आयोगले सिफारिस गरेको थियो, राष्ट्रिय साप्ताहिक नेपाल २०१९ः१८ । यसबीचमा ११ जना प्रहरी प्रमुख बने भने, २२ वटा सरकार फेरिए । तर प्रहरी सङ्गठनभित्रको २०४६ भन्दा अगाडि जस्तै अवस्था रह्यो, नियति फेरिएन । विशिष्टीकरणको अवधारणा कार्यान्वयन हुन सकेन । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य तथा २०६२÷६३ सालकोे जनआन्दोलनबाट प्राप्त ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ मा पनि प्रहरी सङ्गठनमा प्रजातान्त्रिक÷लोकतान्त्रीकरण भएन । मुलुकका संरचनाहरू बदलिए तर सामन्तवादमा आधारित प्रहरी सङ्गठनको स्वरूप, व्यवहार, काम गर्ने शैली कहिले बदलिएन । ठूलालाई अमन चयन, सानालाई जेल, नेल अझैसम्म पनि कायम छ ।
प्रहरीको फितलो अपराध–अनुसन्धानका केही उदाहरण :
घटना नं. (१) निर्मला पन्त हत्याकाण्ड घटनास्थलमा जम्मा भएको भीडलाई प्रहरीले हटाउने काम गरेन । घटनालाई जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि जोगाएर राख्ने काम प्रहरीको हो । पहेँलो फित्ताले चारैतिर बेरेर सबुत प्रमाण जोगाउन घटनास्थललाई सिलबन्दी गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसो नगरिकन फितलो अपराध अनुसन्धान गरेको देखिन्थ्यो । घटना नं. (२) पत्रकार सालिकराम पुडासैनीको हत्या÷आत्महत्या प्रकरणमा प्रहरीको चरम लापरबाही भयो । ठूलो भीडले शव घेर्दा पनि भीड हटाइएन । रौं, फिङ्गर प्रिन्टजस्ता प्रमाणका सबुत त्यही हुनसक्ने हुनाले अनावश्यक भीडलाई हटाउनु पथ्र्यो । तर त्यसतर्फ ध्यान नै गएन । प्रहरी एआईजी नवराज ढकाल भन्छन्, ‘सिन अफ क्राइम’ अपराध अनुसन्धानको मेरुदण्ड हो । प्रहरीको फितलो अपराध अनुसन्धानका कारण अपराधीहरू सजिलै उम्कने गरेका छन् ।’
अपराधका घटना नियन्त्रणमा प्रहरीको भूमिका ः
अपराध अनुसन्धानलाई प्राथमिक आधारमा राखेर सत्य–तथ्य पत्ता लाउने काम प्रहरीको हो । तर प्रहरीहरू नै इमान्दारिताको कसीमा रहेका हुँदैनन् । यसो हुनुमा प्रहरी सङ्गठनमा दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि अर्को कारण हो । खासगरीकन जो प्रहरी शान्ति सुरक्षामा खटिन्छन्, त्यही प्रहरी अनुसनधानकर्ता हुँदा फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसार अनुकूल र कुशल अपराध अनुसन्धान नहुनेसमेत सर्वोच्चको ठहर छ । वि.सं. २०७१ मा प्रहरीले शान्ति सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै ‘कानून एक्सन प्लान’ शुरु गरेको थियो । सो प्लानअनुसार १० प्रतिशत प्रहरी जनशक्ति अनुसन्धानकारी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा सोको कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ । काठमाडौंमा २६ भन्दा बढी साना इलाकाका प्रहरी कार्यालयमा ७ जनाको अपराध अनुसन्धान टिम रहने भनिएकोमा त्यो पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । पूर्व आईजीपी हेमन्त मल्लका अनुसार सानातिना कुराले मात्रै प्रहरीको अपराध अनुसन्धान गर्ने ‘कोर काम’ हुन नसक्ने बताउँछन् २०१९ः१९ । जबसम्म राज्यको नीतिगत स्पष्टता हुँदैन, तबसम्म अपराध अनुसन्धानमा प्रहरी सङ्गठनको फितलो अनुसन्धानमात्र हुने कुरालाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
यही कारण अपराध अनुसन्धानको घटना प्रभावकारी हुँदैन । करिब एकदशकमा घटेका अपराध तथ्याङ्कलाई सर्सर्तीरूपमा यसरी हेर्न सकिन्छ । ०६६÷६७ मा १६.३३ प्रतिशत, ०६७÷६८ मा १६.६४ प्रतिशत, ०६८÷६९ मा १०ः२३ प्रतिशत अपराधका घटनाहरू घटेका थिए । ०६९÷७० मा ४.८९ प्रतिशत, ०६०÷७१ मा २०.९९ प्रतिशत, ०७१÷७२ मा २.५१ प्रतिशत, २०७२÷७३ मा ४.७६ प्रतिशत, ०७३÷७४ मा १०.१५ प्रतिशत, ०७४÷७५ मा २४.९६ प्रतिशत अपराधका घटना घटेका थिए भने २०७५÷७६ मा ९.५० प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ, नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक २०१९ सेप्टेम्बर ८ । यो आँकडामा ०७५÷७६ चालू वर्ष रहेकाले पूरा तथ्याङ्क भने होइन । यसअर्थमा अपराध अनुसन्धानको घटनामा प्रहरी सङ्गठन कति प्रभावकारी छन् त ? गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्दछ । अपराध अनुसन्धानमा फितलो हुनु÷गर्नु, पहुँच पुग्नेलाई सहजै छोडिदिनु र कानूनले पनि उन्मुक्ति दिनु, पहुँच नपुग्नेलाई जेल हाल्नु गल्ती नै नभएकाहरूलाई जेल हाल्नुजस्ता घृणित र निन्दनीय कार्यले प्रहरी सङ्गठनमा चरम लापरबाहीलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ । प्रदेश नं. १ का प्रहरी एसएसपी किशोरकुमार दाहालको वाक्यलाई सापटी लिने हो भने आर्थिक लेनदेन, अनैतिक सम्बन्ध, मादक पदार्थ सेवनजस्ता गलत कार्यमा प्रहरी नै लागेका हुन्छन् । यसबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ कि राष्ट्रसेवक नाम पाएका प्रहरी सङ्गठन नै अपराध अनुसन्धानको घटनामा फितलो हुने र स्वयम् आफै पनि फस्ने र संलग्न हुने गरेका छन् ।
प्रहरी नै कारबाहीमा :
नेपाल प्रहरी सङ्गठन विपरीत कार्य गरेमा प्रदेश नं. १ का ४ सय ७३ प्रहरी र प्रदेश नं. २ का २ सय ८० प्रहरी कारबाहीमा परेको थियो, ०१९ जुलाई ११÷२०१९ अगष्ट ९ ब्लाष्ट टाइम्स । प्रदेश नं. १ मा १ डिएसपी, २ इन्स्पेक्टरसहित ४ सय ७३ जना कारबाहीमा परेका छन् । १ नं. प्रहरीका अनुसार १० जना सइ, ४८ जना असइ, २ जना हवल्दार र २ सय ७० जना प्रहरी रहेका छन् । प्रदेश २ मा एकजना डिएसपी, ४ जना इन्स्पेक्टर, १७ जना सइ, ३७ जना असइ, ६३ हवल्दार र १ सय ५७ जना प्रहरी जवान कारबाहीमा परेका थिए । आर्थिक लेनदेन, अनौतिक सम्बन्ध, मादक पदार्थ सेवनजस्ता प्रहरी नियमावली विरुद्ध काम गरेकाले कारबाही गरिएको जनाइएको थियो । अन्य प्रदेशको आँकडा प्राप्त हुन सकेन । यो आँकडाअनुसार प्रदेश नं. १ र २ मा मात्र ७ सय ५३ प्रहरी कारबाहीमा परेको देखिन्छ । आर्थिक लेनदेन, मदक पदार्थ सेवन, अनैतिक सम्बन्धजस्ता कार्यमा अपराध गरेकाले प्रहरी सङ्गठनको शान्ति सुरक्षाप्रति आम जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
यसरी शान्ति सुरक्षामा खटिएका प्रहरी नै प्रहरी सङ्गठनको नियमावली विरुद्ध गएर कारबाहीमा पर्छन् भने जनताले के अपेक्षा गर्ने ? भेडेटार जाने बाटो, धरानका विभिन्न ठाउँमा ट्राफिक चेकमा खटिएका प्रहरीले के साँच्चै इमान्दारिताको पालना गर्ने गरेका छन् त ? यो निकै गम्भीर विषय हो । मापासेमा परेका मोटरसाइकलहरू प्रहरीले सम्बन्धित कार्यालयमा लगेर राख्छन् र त्यो मोटरसाइकल निकाल्न २–४ दिन ढिलो भयो भने स्वयम् ती प्रहरी नै सो मोटरसाइकल चलाउन थाल्छन् । के प्रहरीलाई यी कुरामा छुट छ ? इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका कतिपय प्रहरी सादा पोसाकमा, बिना हेल्मेट मापसेमा पक्रेका वा अन्य कुनै पनि गल्तीमा पक्रेका मोटरसाइकल किन नहोस् त्यो मोटरसाइकल प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । यस अर्थमा कानून र नियमको पालना गर्ने प्रहरी नै नियमको उल्लङ्घन गर्छन् भने त्यो प्रहरीलाई पनि तुरुन्तै कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? २०१९ जुलाई २७ को ब्लाष्ट टाइम्सको समाचार अनुसार लागूऔषध नियन्त्रणमा लाग्ने प्रहरी सेवामा रहेका प्रहरी नै पक्राउ परेका थिए । इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा दरबन्दी भएर इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा कार्यरत प्रहरी जवान दीपककुमार तामाङलाई पक्राउ गरिएको थियो । यस्तै गरेर सशस्त्र प्रहरी बलका ४ नं. हेडक्वार्टर सुनसरीमा दरबन्दी भएका सुरक्षा बेसक्याम्प गोलबजारमा कार्यरत सशस्त्र जवान जङ्गबहादुर श्रेष्ठ पनि लागूऔषध र पेस्तोलसहित पक्राउ परेको घटना बाहिर आएको थियो । यस अर्थमा जनताको शान्ति सुरक्षामा खटिएका प्रहरी नै प्रहरी सङ्गठन नियमावली विपरीत कार्य गर्छन् भने प्रहरीभित्र व्यापक शुद्धीकरणको आवश्यकता छ । प्रहरीका यही शैलीका कारण जनता प्रहरीसँग शान्ति सुरक्षा दिने सन्दर्भमा सन्तुष्ट छैनन् । प्रहरी एसएसपी किशोरकुमार दाहाल भन्छन्, ‘आर्थिक लेनदेन, अनैतिक सम्बन्ध, मादक पदार्थ सेवनजस्ता प्रहरी नियमावली विरुद्ध काम गरेकाले कारबाही गरेको हो ।’
अपराध अनुसन्धान आफैमा जटिल विषय हो । त्यहीकारण प्रहरी सङ्गठन जनतालाई चाहिन्छ, जसले जनताको सुरक्षा गर्छन् । तर के यी काम गर्न प्रहरी सङ्गठन सक्षम छ त ? प्रश्न यहाँ हो । प्रदेश नं. १ र २ मा ७ सय ५३ जना प्रहरी कारबाहीमा पर्नु भनेको सानोतिनो विषय हुन सक्दैन । के राज्यले सरकारले नीति बनाउन नसकेर वा नीति बनाए पनि प्रहरीको कुण्ठा मानसिकताको कारण यस्तो हुने गर्दछ ? पहिलो सरकारले प्रहरी सङ्गठनलाई नीति बनाएर लोकतान्त्रीकरण गर्नु पर्दछ । दोस्रो सामन्तवादमा आधारित प्रहरी सङ्गठनमा अझै पनि व्यापक सुधारको काम गर्नुपर्छ । तेस्रो आर्थिक लेनदेन र भ्रष्टीकरणमा मुछिएका÷मुछिने प्रहरीको सत्य–तथ्य छानबिन गरी तिनीहरूलाई कानूनको दायरामा तान्नुपर्छ । उन्मुक्ति दिने काम गर्नु हुँदैन । अनुसन्धानमा सही निचोड निकाल्न नसक्ने हो भने त्यसले प्रहरीको साखमै आँच पु¥याइदिन्छ । निर्मला पन्त प्रकरण, पत्रकार सालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या÷हत्या प्रकरणजस्ता अन्य थुप्रै घटनाले प्रहरीमाथि जनताको शङ्का अझै थप पैदा गरिदिएको छ । सत्य–तथ्य बङ्ग्याउने काम गरेर थुप्रै निर्दोष मानिसलाई झुठो मुद्दामा फसाउने काम प्रहरी सङ्गठनभित्रका नालायक प्रहरीले गर्ने गर्दछ । यसको शुद्धीकरणमा गई जनशक्ति सम्पन्न प्रहरी सङ्गठन निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।